कक्षा १२ का प्रश्नपत्र पुरानै ढाँचामा - DURBAR TIMES
HomeEducationकक्षा १२ का प्रश्नपत्र पुरानै ढाँचामा
कक्षा १२ का प्रश्नपत्र पुरानै ढाँचामा
आगामी मंसिर ९ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा पुरानै तरिकाअनुसार प्रश्न सोधिने भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले पुरानै ढाँचाका प्रश्नपत्र तयार गरिने बताउँदै भने, “नयाँ मोडेलको प्रश्नपत्र तयार हुँदैन । प्रश्नको मोडेल पुरानै रहन्छ, प्रश्न सङ्ख्या मात्र घट्ने हो।”
परीक्षालाई डेढ घण्टा बनाइएकाले प्रश्न सङ्ख्या पनि कम हुनेछन् । “उदाहरणका लागि संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर विगतमा छ वटा प्रश्न सोधिन्थे भने अब तीन वटामात्र सोधिनेछ” उनले थपे, “त्यसैले विद्यार्थीहरु आत्तिनुपर्ने वा अन्योलमा रहनुपर्ने अवस्था छैन ।”
बोर्डले विगतको एक सय पूर्णाङ्कको परीक्षा अब ४० पूर्णाङ्कको लिनेछ । त्यस्तै ७५ पूर्णाङ्कलाई ३० मा, ५० पूर्णाङ्कलाई १५ मा र २५ पूर्णाङ्कलाई १० मा झारिनेछ ।
परीक्षा नियन्त्रक शर्माले समय पर्याप्त नभएकाले प्रदेशअनुसार फरक फरक प्रश्नपत्र तयार गर्न नभ्याइए पनि चार, पाँच सेटका प्रश्नपत्र तयार गरिने जानकारी दिए ।
रूटिन हेर्नुहोस् : कक्षा १२ को परीक्षा मंसिर ९ देखि [रुटिन]
उनले समयले भ्याउनसक्ने स्थानमा छपाएका प्रश्नपत्र पठाइने र नभ्याउने स्थानमा इमेल गरेर प्रश्नपत्र पठाइने बताए । “परीक्षा सुरु हुनु केही अघि इमेलबाट परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र पठाइनेछ । कम सङ्ख्यामा प्रश्न हुने हुँदा परीक्षा केन्द्रले प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न नसक्ने अवस्था भएमा कालोपाटीमा लेख्न सक्छन्” उनले भने ।
अझै पनि उत्तरपुस्तिकालाई परीक्षा केन्द्रसम्म पठाइएको छैन । उनले अब केही दिनभित्र उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रसम्म पुगिसक्ने बताए ।
निद्रामा झस्कने समस्या छ ? (जानिराखौँ बच्ने उपाए)
निद्रामा झस्किने समस्या के कारणले आउँछ भन्ने कुनै वैज्ञानिक कारण अहिलेसम्म पत्तालागेको छैन। धेरैमा यो समस्या मनोसामाजिक तथा मानसिक तनावका कारण हुने हुने गर्छ।यस्तो अवस्थामा निद्रा राम्रोसँग नपर्ने, पातलो निद्रा पर्ने, नराम्रो सपना देखिनेहुन्छ। कहिलेकाहीं शारीरिक समस्याका कारण पनि निद्रामा झस्कने …
काठमाडौं । आजदेखि सबै टेलिभिजन वितरकहरुले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को लाइभउपलब्ध गराउने भएका छन् । क्लिन फिड (विज्ञापन रहीत) नीति लागु भएसँगै गतशनिबारदेखि अवरुद्ध आईपीएलको लाइभ बुधबारदेखि पुनः सुचारु हुने भएको हो । स्टार नेटवर्क इन्डियाले नेपाली दर्शकको माग अनुरुप अस्थायी रुपमा समाधान निकालेक…
औंला पड्काउने बानी छ ? अनि यसो गर्नु खतरनाक हो कि होइन ?
औंला पड्काउँदा आवाज आउँछ नि । कहिल्यै याद गर्नुभएको छ किन आवाज आउँछ भनेर ? अनियसो गर्नु खतरनाक हो कि होइन ? एउटा कुरा सुनिश्चित छ । औंला पड्काउँदा बाथरोग लाग्दैन । कसैले लाग्छ भन्यो भनेत्यो झुटो हो । वैज्ञानिकहरूको एक समूहले औंला पड्किने आवाज जोर्नीहरूको बीचमा घर्षण घटाउनका लागिजिम्मेवार साइनोभ…
अलिअलि भन्दाभन्दै नेपालमा पनि कोरोना पोजेटिभ हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमादिनानुदिन बढिरहेको छ । हिजोको दिनमा १–२ भनेर गनिने संक्रमित अहिले सय हुँदैहजारको संख्यामा दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । अस्पतालमा बेड र आईसीयू नपुग हुँदा पछिल्लो समय अधिकांश सर्वसाधारण आफ्नै घरलाईआइसोलेसन बनाएर बसेका छन् । अन…
Previous articleअयोध्यापुरीमा कात्तिक १८मा ‘रामचरित मानस’को पाठपारायण
Next articleरवि लामिछाने दम्पत्तिलाई कोरोना संक्रमण